अञ्जलीसंग मेरो पहिलो सेक्स (यौन कथा)
सायद मेरो मौनतालाई उसले उसको अपिलप्रतिको अनुमति ठानी , अकस्मात उ मेरो काखमै बस्न आई र भनी , ‘ मलाई तिमी मनपर्छौ । असाध्यै मनपर्छौ । हामी साथी बन्न सक्छौं ? ‘ ‘साथी नै त हौं नी हामी , हैनौं र ?’ मैले उ बाट अलिपर सर्दै भनें । ‘मैले नजिकको साथी भनेको नि । संगै रमाईलो गर्ने के । लाईक सेक्स पार्टनर के । हाम्रो आआफ्नो बाटो त छंदैछ ।
जिन्दगीमा केहि रमाइलो पनि त हुनुपर्यो नि , हैन र ? यति टाढा आएर बसेका छौं हामी ।’ उसको बोलाईमा दम थियो । म त के मैं हुं भन्नेहरुलाई पनि आफ्नो बसमा पार्ने खुबि थियो उसमा । अहिले म दोधारको स्थितीमा थिएं । एकमनले लाग्थ्यो जब केटीहरु नै यसरी अगाडी बढेर सेक्स अपिल गर्छन भने मैले कमजोर भएर पछि हट्नु हुंदैन । अर्को मनले लाग्थ्यो यो पतनको बाटो हो मैले यसरी नैतिकतालाई बन्दकी राखेर जो आयो तेहि संग शारिरिक सम्पर्क राख्नु हुंदैन । अञ्जली संग यसरी अकस्मातको भेटमा सोच्दै नसोचेको परिस्थिती अगाडी आउंदा म मा एक प्रकारको जोस आएको थियो । उसलाई त्यही सोफामै सुताएर उ संग शारिरिक संसर्ग गरुं जस्तो लाग्दैथ्यो फेरी त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि थियो । उ निक्कै अगाडी बढिसकेकि थिई । आफ्नो स्तन मेरो छातीमा दल्दै मलाई चुम्बन गर्न तम्सिरहेकि थिई उ । आफु दोधारे स्थितीमा भएकोले मैले उसलाई चुम्बनमा न त पुरा साथ दिन सकिरहेको थिएं न त उसलाई छोडेर हिंड्न नै । कतै मैले सुनेको थिएं आईमाईहरु लोग्ने मान्छेले भन्दा दुई गुणा बढि खाना खन्छन , चार गुणा बढि लजाउंछन , छ गुणा बढि साहसी हुन्छन अनि आठ गुणा बढि कामुक हुन्छन ।
यस्तो नहुन पनि सक्छ तर अञ्जलीलाई देख्दा भने मलाई यस्तै हुंदोरहेछ भन्ने लाग्यो । सहसा म उसको स्तनसंग खेल्न लागीसकेको थिएं । मैले अनुमान गरे अनुशार नै उसले शर्टमात्र लगाएकि थिई तल उसका पोटिला तिघ्राबिचमा यौटा सानो डोरोमात्र भएको कट्टु थियो । त्यस्लाई सायद थङ्ग भन्छन क्यार । मैले आफ्नो हात उसको योनिभाग तर्फ मुसार्दा उक्त थंङ्गको डोरो योनिमा धसिएको थियो । सायद यसरि डोरो योनिमा धसिनु नै यो लगाउनुको मज्जा होला नत्र भने त्यसले न केहि छेक्थ्यो न कट्टु लगाएको जस्तो हुन्थ्यो । अर्को कुरा थंङ्ग लगाउंदा अकस्मात सेक्स गर्नुपर्ने स्थिती भै परि आउँदा खोलिरहनु नपर्ने भन्ने पनि होला । डोरोलाई यसो पन्सायो बस काम तमाम । एकाएक म अञ्जलीसंग सहबासको लागी तयार भै सकेको थिएं ।
मैले उसलाई समाएर बिस्तारै सोफामा पसारें र उ माथी चढ्ने क्रममा लागें । उ यस्तरी सन्चो मानिरहेकि थिई कि मानौ उसको बर्षौंको सपना साकार हुन गै रहेको छ । जब मैले उसको योनिको पोटिलो दुईगालाको बिचमा धसिएको डोरो आफ्नो औंला गाडेर निकालें र थंङ्ग फुकाल्न खोजें उ आत्तिएझैं मलाई धकेल्दै उठी र ढोका लक गरेको छैन भन्दै कोठाबाट बाहिर निस्किई । मेरो दशा त्यसबेला हेर्न लायक भएको थियो । म जुरुक्क उठें मेरो लिंग कडा भएर र्याल चुहाउंदै थियो । मलाई आफु यत्तिकै प्यासी नै रहन्छु भन्ने लाग्यो । लोग्ने मान्छे पनि यौनको मामलामा आईमाई भन्दा पछि कहाँ हुन्छन र ? मैले जुनसुकै हालतमा अन्जली संग संभोग गर्ने अठोट गरेर उसको पछि लागें । मलाई उसले अरु केहि गर्न दिन्न होला भन्ने लाग्दैथियो तर उ साँच्चै ढोका लक गर्नै गएकि रहिछे । म ढोकामा पुग्दा उ फर्कंदैथिई । ‘अब ढुक्क भयो ।’ उसले भनि र मलाई अंगालो हालेर सोफातिर फर्काई ।
‘ किन ? किन अब ढुक्क हुन्छ ? ‘ मैले सोधें । ‘मलाई मधु आउंछ जस्तो लाग्यो । आज उसको काम छैन त्यसैले आउन सक्छ । ‘ उसले भनी । को मधु ? यो नयाँ पात्र मैले नचिनेको परेछ । किन आउंछ यहाँ ? कतै मधु पनि म जस्तै सेक्स पार्टनर त हैन ? म भित्रको जोस केहि सेलाएर गयो । ‘मेरो साथी हो मधु । म संग बिहे गर्न खोज्दैछ ।’ उसले मधुको संक्षिप्त जानकारी दिई । मधु जो सुकै होस जे सुकै गरोस मलाई मतलबको कुरा थिएन । तर म संग सुत्न खोज्दैछे अनि अर्को कोहि संग डराउंदैछे । मलाई अञ्जलीदेखि डरलाग्यो । यो खतरनाक हुन सक्छे मेरो लागी भन्ने भयो । त्यसैले मैले पन्सिने उपाय निकाल्नु नै उचित देखें र उठें । मैले पछि भेटेर आजका बाँकी सबै कुरा गरुंला भन्दै बिदा हुन चाहें तर अञ्जलीमा आजै गर्ने अठोट थियो । उ सम्पुर्ण रुपमा तयार भएर सोफामा उत्ताने परेकी थिई । उ
सले पोटिलो योनिको भित्रि रातो भाग देखाउदै भनि , ‘ तिमी मलाई यस्तो बेलामा कसरि छोडेर जान सक्छौ ? कि तिम्रो माल छैन ? नपुंशक नै हो भने त……..’ अब सवाल मेरो पुरुष्त्वमाथी उठेको थियो । मैले म मर्दछोरा हुं भनेर उसलाई देखाउनु नै पर्ने भयो । त्यसैले म झम्टेर उ माथी जाईलागें । मलाई पनि के थियो र ? एकछिन को मज्जा लुट्नु न हो । मेरो पुरुष्त्वमाथी नै प्रश्न उठ्दा त मैले भोलीको परिणाम सोचेर बस्ने कुरा पनि आएन । मैले आफ्नो कपडा खोलेर सिधै लिंग उसको योनि मा प्रवेश गराउने हिसाबले गएं र उसको स्तनमा मुख गाडेर लिंग प्रवेश गराउन सुरु गरें । –